Shirkadaha Soosaarayaasha Nuunu ee Hawaii, Soosaarayaasha Soosaarida Macadamia ee Bolise
Soosaarida Nunu Hawaii
[Micnaha erayada] Macadamia Extract
[Muuqaal] Boodh huruud ah oo bunni ah
[Qeybta la Adeegsaday] Dhammaan
[Habka Tijaabada] HPLC
[Faahfaahinta] 90%, 95%, 98%
Waxqabadka Soosaarida Nunu Hawaii
1. kareem sunblocking ah wakiilka maqaarka dhirta ugu fiican
2. Kahortaga cagaarshowga, Aids, hyperlipidaemia
3.Kordhinta shaqada jirka
4. Daaweynta antitussive expectorant, boog calooleed, dermatitis
5. Xakamaynta sarcoma iyo koritaanka unugyada kansarka
Codsiga Soosaarida Nunu ee Hawaii
1. Loo adeegsaday warshadaha daryeelka caafimaadka;
2. Waxaa loo adeegsaday warshadaha qurxinta, waxaa laga dhigi karaa meel;
3. Waxaa loo isticmaali karaa raashin ahaan lagu daro.
Ku saabsan Soosaarida Nunu Hawaii
Hawaiian Nunu Extract wuxuu u dhashay Australia wuxuuna ka tirsan yahay qoyska Asparagus, oo ah geedka lowska, weligiisna waa cagaar.
Budada nunu ee loo yaqaan 'Hawaiian nunu' waxaa loo yaqaan "Boqorka Miraha la qalajiyey". Nidaamkeeda xididkiisu waa gacmo-yar oo iska caabbinta dabayshu way daciif tahay, heer kulkeeduna waa 10-30 ° C, heer kulka ugu habboonina waa 15-30 ° C. Deegaanka ka hooseeya 10C ama ka sarreeya 30 ° C uma fiicna koritaanka lowska. Midhaha wanaagsan waxay ka baxaan aagga roobka sanadlaha ahi uu gaarayo 1000-2000mm. Si kastaba ha noqotee, midhaha ayaa si tartiib ah ugu baxa aagga roobka uu ka hooseeyo 1000mm, midhihiisuna way sii yaraanayaan, si liidata ayey u horumareen, miro-dhalintuna waa halis.
Ku keydi meel qabow & qalalan; Ka fogow nalka xoogga leh iyo kuleylka badan.
24 bilood marka si sax ah loo kaydiyo
Heerka ganacsiga. Durbaanno ama kartoonno, 25kgs / durbaan (kartoon), 2.5kg / kiish, laba jeer oo xirmidda baakidh caag ah (bacaha foornada oo faaruq ah)